Kuva Ne Dambudziko Kubloga? Ronga Zvakakodzera. | Martech Zone
Kuva Ne Dambudziko Kubloga? Ronga Zvakakodzera.
Chipiri, July 26, 2011 China, November 22, 2012 Jenn Lisak Golding
Semunhu chaiye uye ane hunyanzvi blogger, ndine dambudziko kupomba kunze blog blog zuva rega rega nekuda kwebasa rangu rekutakura uye nezvimwe zvipingamupinyi zvenguva. Asi kana iwe uchida kubudirira se blogger, ingave iri yega kana yehunyanzvi, iwe unofanirwa kusanganisa zvinhu zvitatu: kukurumidza, kukosha. Kuti ubatanidze chimwe nechimwe chezvinhu izvi, zvakakosha kuti uve nehurongwa. Heano matatu anokurumidza matipi ekukubatsira iwe blog zvakanyanya zvakanaka:
1. Gadzira chinyorwa chemukati.
Sarudza kuti ndeapi mazuva aunoda kutumira pane yako blog uye ramba uchigadzira zvirimo pamazuva ano. Vaverengi pavanoziva nguva yekutarisira zvemukati, ivo vanozonyanya kuverenga zvinyorwa zvako mumazuva iwayo. Zvakare, edza kutumira kanokwana katatu mukati mevhiki. Iyo inochengetedza yako bhizinesi kumusoro kwepfungwa, uye inobatsira neSEO, kushambadzira uye kusimudzira kwemhando.
2. Gadzira chirongwa chemukati.
Kazhinji yenguva, dambudziko nderekuedza kufunga zvaunoda kublog pamusoro. Tarisa pakarenda yako - kana uchienda kuchiitiko chakakodzera munguva pfupi, ronga kunyora nezvazvo zuva rinotevera. Kuva nehurongwa hwezvaunonyora nezvazvo zvinoita kuti zvive nyore kwauri kuti upedze rako rekublogi basa kwezuva iro.
3. Kuchengeta nguva kwakakosha.
Nyora nezve zvinhu zvinoenderana nenguva uye kusimudzira zvawatumira nenzira yakakodzera. Kana iwe uchinyora nezve inopisa musoro wenyaya, ita shuwa kuti iwe unogovana pazvinonyanya kubatsira kubva kune iyo SEO uye yekutengesa maonero.
Kutora nguva kuronga blog yako yemwedzi unotevera kana svondo rinouya kuchakuchengetera nguva mukufamba kwenguva. Asi usakanganwa kugadzirisa apo pazvinenge zvakakodzera!
Tags: Bloggingkubatanidzwa bloggingurongwakurongakunyora